ကြိုးချည်အမျိုးအစားများ | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 28/11/2021 21:00 | ဖြည့်, ပုံ
သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်ရတာ ကြိုက်တဲ့ အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ ရှိတယ်။ Tie နှင့် knots အမျိုးအစားများတွင် အကောင်းဆုံးဗားရှင်း၊ သူတို့အဝတ်အစားပေါ်မှာ လိမ်းလို့ရတယ်။ သူတို့အားလုံး တူညီနေပေမယ့် တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ တူပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းရှိပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏ပုံစံအားလုံးကို သဘောကျသည်။ တစ်ချို့က အရမ်းထူးခြားတယ်။ အလွန်ဘုံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ သို့မဟုတ် အထူးအခွင့်အရေးများအတွက်။ ချည်ကြိုးကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ မင်းရဲ့စတိုင်နဲ့ လိုက်ဖက်တယ်။ လုပ်နည်းကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ကြိုးတစ်ခုထက်ပို၍ ချည်ပါ။ အမြဲတမ်း တူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ နောက်ဆုံးကို သွားဖို့မဖြစ်ဖို့ပါ။
1 လည်စည်းသည် ရာစုနှစ်များစွာကတည်းက အမျိုးသားများကို ၀တ်ဆင်လာခဲ့သည်။
3 Windsor ကြိုးထုံး
5 ကြိုးထုံး စိန့်အင်ဒရူး
လည်စည်းသည် ရာစုနှစ်များစွာကတည်းက အမျိုးသားများကို ၀တ်ဆင်လာခဲ့သည်။
သူ့ရဲ့စတိုင်လ်နဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုက အမြဲတမ်း ကျက်သရေရှိတာကြောင့် ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့အဝတ်အစားကို ဘယ်တော့မှ ဖယ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ၁၆၆၀ မှာ ပေါ်လာတယ်။ အီတလီရှိ ၎င်း၏လှပသော ရုံးချုပ်နှင့်အတူ အနုပညာအားလုံးကို တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ အစပိုင်းတွင် ပြင်သစ်တွင် လည်ပင်းတွင် ချည်ထားသော ပဝါအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏ပုံစံကို တော်လှန်နေပြီဖြစ်သည်။
ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ လည်ပင်းမှာ ကြိုးထုံးနဲ့ ပုံမှန်ချည်ပါ။ လှပသော အထိအတွေ့ကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန်အတွက် ဤထုံး၏အောက်ကို ချဲ့ထွင်ထားသော ရှည်လျားသော အမြှောင်းကြီးတစ်ခုနှင့်။ အခုက ဖက်ရှင်တစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာ၏ မည်သည့်ထောင့်ကိုမဆို သတင်းပို့သည်။ ၎င်းကိုကြော့သို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့စတိုင်ဖြင့်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံ berecasillasgranada.com မှ
ဂန္ထဝင်ကြိုး လူမှုရေး လူတန်းစားအားလုံးနှင့် မော်ဒယ်အားလုံးနီးပါးတွင် အရင်းနှီးဆုံး၊ သူ့အသွင်အပြင်က ဂန္ထဝင်ဆန်မှုကို ပေးစွမ်းတဲ့အတွက် သူ့ပုံစံကို သံသယဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ စတိုးဆိုင်အားလုံးတွင်ပေါ်လာသည်။ သူ၏လည်စည်းသည်7စင်တီမီတာအကျယ်ရှိပြီး ရှပ်အင်္ကျီ၏ခလုတ်များကိုဖုံးကာ ခါး၏အစိတ်အပိုင်းကို အမှန်တကယ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။
၎င်း၏ထုံးသည် လည်ပင်းအားလုံးနီးပါးတွင် မြင်တွေ့ရပြီး ၎င်းကိုဖွဲ့စည်းရန်အတွက် အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အစွန်းနှစ်ခုကို မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် ချည်နှောင်ထားသည်။ ကျဉ်းသောအပိုင်းကို ညာဘက်နှင့် ကျယ်သောအပိုင်းကို ဘယ်ဘက်တွင် ထားရှိသည်။
ကျဉ်းသောအပိုင်းကို ဘယ်ဘက်နှင့်နောက်သို့ လှည့်စဉ်တွင် ကျယ်သောအပိုင်းကို ညာဘက်သို့ဖြတ်ပါမည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို မြှောက်လိုက်မည် (နောက်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်) နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို တက်သွားသည်နှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ကြိုးထုံးအတွင်း၌ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါမည်။
အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုလုံးကို မြဲမြံစွာကိုင်ထားရင်း အဆုံးများကို အောက်သို့ဆွဲချခြင်းဖြင့် ထုံးကို တင်းကျပ်ပါ။
corbatasstore.es မှ ဓာတ်ပုံ
ဒီကြိုးက သူတို့အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အတွဲပါ။ ကျယ်ပြန့်ပြီး ထူထဲသော ဆက်ဆံရေး. ၎င်းသည် အခြားသူများနှင့် အလွန်ဆင်တူသော ထုံးပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော်လည်း ၎င်းကို သတိပြုမိမည်ဖြစ်သည်။ အစိုင်အခဲ၊ တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်။. ၎င်း၏အမည်သည် ဤထုံးအမျိုးအစားကို အပြည့်အဝကိုယ်စားပြုသည့် Duke of Windsor ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
လည်ပင်းမှာ လည်စည်းကို ချည်နှောင်ထားတယ်။ ကြိုးနှစ်ချောင်းသည် ဘေးနှစ်ဖက်သို့ ပြုတ်ကျရမည်။ ကျဉ်းသောအဆုံးသည် ညာဘက်သို့သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျယ်ပြန့်သောအဆုံးသည် ဘယ်ဘက်သို့သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျဉ်းမြောင်းသောအကွက်ကို ကျော်ဖြတ်ကာ နောက်မှဖြတ်ကာ ရှေ့သို့ထပ်ကာ ညာဘက်သို့ လှည့်သည်။
ငါတို့က အဲဒါကို နောက်ပြန်ကူးပြီး တောင်မတက်ဘဲ ဘယ်ဘက်ကို ကွေ့သွားတယ်။
ကြိုးထုံးနဲ့ နီးအောင် ဖြတ်ဖို့ အခု မြှောက်နိုင်ပေမယ့် အောက်ကို လှည့်ပြီး ဘယ်ဘက်ကို လှန်လိုက်ပါ။
ကြိုးထုံးကို ဖုံးအုပ်ဖို့ လှည့်ပတ်ပြီး လှည့်ပြီး ပြန်ပြီးတင်ဖို့ ညာဘက်ကို လှည့်လိုက်မယ်။
အပေါ်ဆုံးရောက်သည်နှင့်၊ ကြိုးတစ်ခုလုံးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ချည်နှောင်ပြီး အောက်သို့လျှောချပါမည်။
ဤထုံးအမျိုးအစားသည် ရိုးရှင်းသောထုံးနှင့် အလွန်ဆင်တူသော်လည်း၊ ကြိုးကို နှစ်ခါလှည့်ပါ။ အစွန်းနှစ်ဖက်စလုံးကို ပြုတ်ကျစေပြီး ညာဘက်တွင် အကျယ်ဆုံးကို လည်ပင်းတွင် ချည်နှောင်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျယ်ပြန့်သောအပိုင်းကို ဘယ်ဘက်နှင့် အခြားတစ်ဖက်သို့ ဖြတ်သန်းပါ။
နောက်ပြန်လှည့်၊ တစ်ဖက်စွန်းကိုဖြတ်ပြီး ဘယ်ဘက်လှည့်၊ အပြည့်လှည့်ပြီး နောက်ကနေတစ်ဖန် ရှေ့ကိုဖြတ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိတယ်။
နောက်တစ်ကြိမ်၊ အပေါ်ဘက်တွင် ကျယ်သောအမြှောင်ကို မြှင့်ကာ ထုံးထဲသို့ဝင်သွားစေရန် နှိမ့်ချလိုက်ပါ။ ဒီကနေစပြီး တပ်ဆင်ပြီး ကြိုးတစ်ချောင်းလုံးကို တင်းကြပ်သွားမယ်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ထုံး အလယ်အလတ်အရွယ်အစား အနည်းငယ်ပိုသောအသံနှင့်အတူ သမားရိုးကျနည်းလမ်းထက်။ ၎င်းသည် အမှန်တကယ် အချိုးကျပုံရပြီး နောက်တစ်ကြိမ်လှည့်ခြင်းဖြင့် ရိုးရိုးထုံးဖွဲ့မှုနှင့် ကွဲပြားပါသည်။
လည်ပင်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင် ကန့်လန့်ဖြတ်နှစ်ခုကို စတင်ပါမည်။ အကျယ်ကို ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထားမှာဖြစ်ပြီး ရှေ့နဲ့ ဘယ်ဘက်ကို လှည့်ပြီး ကျဉ်းတဲ့နောက်ကို လှည့်ပါမယ်။
လက်ဝဲဘက်တွင် ထားရှိကာ ရှေ့နှင့်အထက်မှ ဖြတ်သွားကာ ထုံးနောက်ကွယ်မှ ဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ငါတို့က အဲဒါကို ထပ်ချပြီး ညာဘက်ကို လှည့်ပြီး ရှေ့ကို ဖြတ်သွားပြန်တယ်။ ညာဘက်ကနေ ပြန်တက်သွားလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် ပြုတ်ကျတဲ့အခါ ထုံးကြားထဲကို ဝင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ခိုင်မြဲနေအောင် တင်းထားရပါမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » လည်စည်းမိုင်အမျိုးအစားများ